Sida wax looga beddelo "Xusuusta" macruufka 10 | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo saxo "Memories" ee iOS 10
Applelised | | Tababarada
Gudaha barnaamijka cusub ee iOS 10 Sawirrada, waxaan ka helaynaa qayb lagu magacaabo "Xusuus-qorro." Astaantan cusub waa mid otomaatig ah oo lagu dhisay wejiga cusub, sheyga iyo shaqooyinka aqoonsiga goobta ee Sawirradu isku daraan.
"Xusuus" waa Filimooyin otomaatig ah oo laga sameeyay sawirro iyo fiidiyowyo lagasoo qaaday waqti iyo goob cayimanr, tusaale ahaan, safarkii ugu dambeeyay ee aad qaadatay. Sawirro ay iyadu keligeed abuurto, oo ay raadiso cirifkaaga, laakiin sidoo kale waad hagaajin kartaa oo aad wax ka beddeli kartaa Xusuus kasta aad jeceshahay hab aad u fudud.
1 Baro inaad wax ka beddesho Xusuustaada iOS 10
2 Editing Memory fudud
3 Xusuus-qorid Xasaasi ah
Baro inaad wax ka beddesho Xusuustaada iOS 10
Ku dhex baaro barnaamijka Sawirada ee iOS 10 si aad uga hesho qaybta "Xusuusta" cusub. Halkaas waxaad ku dhex mari kartaa xusuus kala duwan oo aad ku xulan kartaa inaad wax ka beddesho ama wadaagto. Haddii aad gasho aragtida faahfaahsan ee mid kasta oo ka mid ah xusuustaas, waxaad ka heli doontaa soo koobitaan ku saabsan sawirrada iyo fiidiyowyada ay ku jiraan. Oo haddaad riixdo "Show all", waxaad arki doontaa dhammaan sawirrada iyo fiidiyowyada lagu daray.
Hoos u rog rog oo waxaad arki doontaa goobta juquraafi ahaan halkaasoo sawirada, sawirro dhow, iyo xusuus kale laga soo qaaday. Sidoo kale dadka ka muuqda sawiradaas iyo muuqaaladaas.
Labadii ikhtiyaar ee ugu dambeysay waxay kuu oggolaaneysaa inaad calaamadeyso ama calaamadeyso xusuusta sida aad jeceshahay ama aad gebi ahaanba tirtirto. Ha iloobin in haddii aad tirtirto xusuusta laga tirtirayo dhammaan qalabkaaga iyo iCloud.
Editing Memory fudud
Marka Xusuusta ugu horreysa ay soo muuqato, si fudud ayaad wax uga beddeli kartaa. Si tan loo sameeyo, raac talaabooyinka soo socda:
Taabo Xusuusta kore ee shaashadda si aad ugu ciyaarto.
Riix meel kasta oo shaashadda ah si aad u soo qaaddo kontaroolada tifaftirka oo u riix batoonka hakadka.
Xullo mowduuca shucuurta ah ee aad rabto inaad ugu magacdarto Xusuustaada, sida "farxad," "jilicsan," ama "epic" adoo u rogaya bidix ama midig hoosta Memory-da.
Kadib markaad go aansato mowduuca, dooro mudada: gaaban (ilaa 20 ilbiriqsi), dhexdhexaad (ilaa 40 ilbiriqsi) ama dheer (ilaa 1 daqiiqo). Waxay kuxirantahay waxyaabaha kujira, waxaad kaliya arki kartaa labo kamid ah xulashooyinkaan, xitaa hal kaliya.
Haddii Xusuustu ay jeceshahay, riix badhanka Share ee dhinaca bidix ee hoose si aad u tusto xusuustaada asxaabtaada iyo qoyskaaga adoo adeegsanaya emayl, Farriimo, AirPlay, Facebook, iyo waxyaabo kaloo badan.
Xusuus-qorid Xasaasi ah
App-ka iOS 10 Sawirrada wuxuu kaloo kuu oggolaanayaa inaad si qoto dheer ugu dhaadhacdo tafatirka iyo qaabeynta Xusuustaada. Thanks to qalabka tafatirka waxaad wax ka beddeli kartaa sawir kasta ama fiidiyowga ururinta. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa oo tirtiri kartaa sawirada iyo fiidiyowyada Xusuusta. Aan aragno sida loo sameeyo:
Marka aad ku jirto shaashadda tafatirka fudud ee aan horay u soo aragnay, riix badhanka wax ka beddelka dhinaca hoose ee midig ee shaashadda, ka dibna riix "Sawirro iyo Fiidiyowyo".
Si aad u tirtirto waxa ku jira, ka hel sawirka ama fiidiyaha su'aasha ah adigoo u wareegaya bidix ama midig shaashadda.
Guji astaanta qashin qubka midigta hoose ee shaashadda si aad u tirtirto sawirka ama fiidiyowga Xusuustan.
Si aad ugu darto warbaahin, taabo astaanta "+" ee bidixda hoose ee shaashadda.
Halkan waxaad ka arki kartaa dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada la heli karo si loogu daro Memory-kan, oo ay doorteen algorithms-ka caqliga leh ee Apple.
Taabo warbaahin kasta si aad ugu darto Keepsake (waxaad sidoo kale isticmaali kartaa shaashadan si aad uga saarto waxyaabaha adigoo ka dooranaya calaamadda jeegga).
Guji "la qabtay".
Waxaad sidoo kale tafatiri kartaa fiidiyow kasta qaybtan arjiga. Markaad ka hesho qaybta "Sawirrada iyo fiidiyowyada", waad weyneeyn kartaa ama gaabin kartaa clip kasta adoo jiidaya bilowgiisa iyo dhammaadka aaladda tafatirka oo ka muuqan doonta qeybta eyga shaashadda.
Markaad Memory-kaaga diyaar u noqoto, riix fallaarta gadaal si aad ugu noqoto shaashadda tafatirka ee ugu weyn.
Qeybtaan sidoo kale waad tafatiri kartaa cinwaanka, mudada, iyo waliba muusigga xusuus kasta. Waad ku dari kartaa wixii muusig ah ee laga soo dajiyo Maktabadaada ama waxaad ka dooran kartaa kuwa la heli karo.
Si aad si joogto ah u keydiso dhammaan isbeddelada, riix "OK" waxaadna ku laaban doontaa aaladda tafatirka aasaasiga ah halkaasoo mowduucyada iyo dhererka wax laga beddelay. inaad dib ugu soo noqotid menu-ka wax ka beddelka aasaasiga ah oo leh mowduucyo shucuur iyo weedho qabasho dheer. Mar labaad, halkan waxaad u isticmaali kartaa kordhinta Share si aad ugu faafiso Memory-kaaga cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo saxo "Memories" ee iOS 10
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Waxaan u maleynayaa inaan xoogaa khaldan ahay maanta, iphone 5 uma arko "xusuustaan" ama taas ama ma ahan qalabkan
Ku soo jawaab Fjavier
Waad salaaman tihiin. Haddii aad dhawaan cusbooneysiisay, waa inaad u oggolaataa "sirdoonka" Apple inay shaqadooda qabsadaan si ay kuugu bilaabaan inay ku tusaan Xusuus. Inta aan ogahay, muuqaalkani wuxuu la jaan qaadayaa iPhone 5.
Weli ma fahmin sababta aysan ugu qarinaynin sawirada lambar sir ah si ay u ahaadaan kuwa gaar ah, way qarsadaan oo waxay ku soo muuqdaan dusha sare, waxaad qaadataa sawir gacmeed waxayna ku soo baxayaan labo albam, ma jecli Maareynta sawirka iOS dhammaantiis, waa waxa kaliya ee aanan sameynin waan ka helay.
Iphone5c ma leedahay xulashada xusuusta?
Ma dooran kartaa sawirka daboolka filimka xusuusta?
Dhibaatadu waxay tahay in kasta oo fiidiyowyadu ay fiican yihiin, markii aad u soo gelineyso Facebook-ga haddana waxaa lagu arkaa tayo aad u xun 🙁 fikrado kasta oo lagu xallinayo? Aad baad u mahadsantahay !!!
Nuria Aragon dijo
Hadday suurta gal tahay. Qaabka wax loo beddelayo waxay si toos ah kuu weydiineysaa sawirka jeldiga (isla meesha aad ku sheegi karto inta aad rabto inaad noqoto, magaca cinwaanka, iwm.)
Ku jawaab Nuria Aragón
Haa. Waad dooran kartaa sawirka daboolida xusuusta. Qaabka wax loo beddelayo waxay si toos ah kuu weydiineysaa sawirka jeldiga (isla meesha aad ku sheegi karto inta aad rabto inaad noqoto, magaca cinwaanka, iwm.)
Tan kama heli karo iPhone 5c, iyada oo faallooyinka aan aqriyay ay umuuqdaan inaanan ahayn qofka kaliya ee isku mid ah
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad dooran karto sawirka daboolka xusuusta.
markaan aado xulida heesta xasuusta iima ogola
Ku jawaab julian serrano
Ma awoodin inaan badalo sida sawirada ay u kala horeeyaan, macquul ma tahay?
Hagaag, maxaad rabtaa inaan kuu sheego? Suurtagalnimadani si fiican iguma shaqeyso aniga. Markaad rabto xusuusta sida iPhoneku sameeyo, ok. Waa wax cajiib ah. Laakiin markaad rabto inaad wax ka bedesho, mar dambe maahan. Waad saxeysaa dhererka fiidiyowyada ka muuqda, haddii ay cod tahay iyo in kale, sawirrada qaar waad ka saareysaa oo kuwa kale ayaad ku dartay, muusig kale ayaad dhigaysaa, cinwaanka iyo sawirka daboolka ayaad ku darreysaa ..., wax walboo wey soo baxaan, wax walba aad ayey umuuqataa laakiin markaa Markaad siiso si aad u abuurto xusuus, fiidiyowyada qaar ee codka lahaa waxay soo baxeen iyagoo aan cod lahayn, waxay u beddeleysaa jihada tooska ah ee sawirrada qaarkood, kuwa la xushay qaarkood ma muuqdaan oo kuwa kale ayey ku celinayaan, iwm
Kaalay, marwalba waa inaan dib-u-habeeyo oo aan wax ka beddelo xusuusta oo aan marar dhif ah u helo inay wax walba si sax ah u soo saarto.
Fikraddu wey fiican tahay laakiin dalabku wuu badiyaa.
Aniguna waxaan haystaa awood buuxda iPhone 11 Pro Max, oo leh softiweer casriyeysan. Marka dhibaatadu meesha ma taal ...
Tani waa sida sawirka sawirku uga shaqeeyo iTunes 12.5.1
Ku hagaaji waxqabadka iOS 10 ee ku saabsan iPhone ama iPad